Iyo iPhone 8 ndiyo ine simba kwazvo, pamberi peiyo iPhone X | IPhone nhau
Iyo iPhone 8 ndiyo ine simba kwazvo, pamberi peiyo iPhone X
Miguel Hernandez | | iPhone 8, IPhone Zviteshi
Panguva ino handifunge kuti tinofanirwa kutaura kana kubvunza mashandiro kana kugona kweA11 Bionic, processor iyo iyo Cupertino kambani yakapihwa kwatiri musi wa12 paKeynote. Nekudaro, lKana kuti pamwe isu hatina kutarisira vazhinji ndekwekuti maererano nesimba iyo iPhone 8 ndiyo yaive hombe mune iyo renji. Zvakanaka, gara pasi, nekuti zvirokwazvo iyo iPhone 8 ndiyo inesimba kwazvo terminal mune zvakajairika mazwi ayo Apple yakatanga uye ichavhura muna 2017.
Zviri pachena kuti isu tinofanirwa kutora ruzivo urwu netweezers, nekuti pane zvakawanda zvakawanda zvinoita kuti iyo iPhone 8 iputse chaizvo zvibodzwa izvo zvinobva kubhodhi.
Kutanga, uye kuve wakasununguka, chokwadi ndechekuti iyo iPhone 8 inofambisa resolution yakaderera pane FullHD, nepo iyo iPhone 8 Plus uye iPhone X mapaneru ari pachena akakwirira mune izvo. Kune vamwe vese, zviri pachena kuti FaceID uye saizi yepaneru inoda imwe nzvimbo, zvakanyanya zvekuti iyo Super Retina skrini yeiyo iPhone X inofanirwa kukanganisa mashandiro. Izvi hazvireve kuti iyo iPhone X haisi kuzofamba, nekusiyana, zvinopfuura zvingangodaro chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo (kana zvisiri zvakanyanya) pamusika. Zvisinei, mutsauko hauna basa, aya ndiwo maitirwo aanopa Geekbench:
iPhone 8: 4195
iPhone 8 Uyezve: 4128
iPhone X: 4028
iPhone 8: 10005
iPhone 8 Uyezve: 9829
iPhone X: 9287
iPhone 8: 15624
iPhone X: 15540
iPhone 8 Uyezve: 15520
Iyo iPhone 8 inokunda munzvimbo dzese, mukugadzirisa dhata haina kungorova maPhones ese chete, asiwo zvimwe zvese zvigadzirwa zviri mukati, nepo muchiitiko chekuita kwemifananidzo iri pazasi peiyo iPad Pro 10,5 uye mukoma wake mukuru iyo 12,9 iPad Pro (inogara ichitaura nezvechizvarwa chekupedzisira). Zvirokwazvo, iyo iPhone 8 kunyangwe yayo diki yekutanga kubudirira mukutengesa imhuka yechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 8 » Iyo iPhone 8 ndiyo ine simba kwazvo, pamberi peiyo iPhone X
Iyi data kana izvi zvichindishamisa, mukuwedzera kune multicore inofambira mberi kune iyo Iphone X nekukwana, nekuti ivo vachange vakatarisa pachiratidziro kupfuura mune zvimwe zvinhu uye kuti zvese zvinoenderana uye nezvimwe.
Ruben Lopez akadaro
Iyi yaive nharembozha iyo "hapana aida", uye ikozvino ndiyo nhare ine simba kwazvo pamusika. Ndezvipi zvinhu zvinochinja kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera.
Uye ichokwadi kuti mutsauko mune dzakawanda-musimboti neiyo iPhone X hausi mudiki asi pane chaizvo. Kana iyo iPhone 8 iri kutengesa zvishoma imhaka yekuti kune vanhu vazhinji vakamirira iyo iPhone X, ine mutsauko mukuru dhizaini. Tichaona kana zvabuda kuti Face ID inoshanda sei, nekuti ini ndinofungidzira kukwira kwekutengesa kweiyo iPhone 8 yeKisimusi kana vakasara.
Pindura Rubén López
Izvo hazvisi zve simba chairo, muchokwadi miedzo iri nani nekuti kuve yakafanana processor, mune iyo iPhone 8 inofanirwa kufambisa yakaderera mhando skrini, mune iyo 8 yekuwedzera nenzira imwechete asi yakakura uye zvakare nemamwe mapikisheni. , kuitira kuti pakupedzisira skrini yakanaka kwazvo yeIphone X inodhura zvakanyanya kuifambisa, zvisinei iwo mutsauko haukosheswe.
Nekudaro, zvakafanana nekutamba mumwe mutambo mune yakaderera mifananidzo, inomhanya zvirinani, asi hazvireve kuti zvirinani, kutamba mune yakakwira mifananidzo; Inogona kunge yakafanana pc asi iyo yekudzoka ichiri kusiyaniswa, kunyangwe iri pabepa uye isingazwisisike.
Dhizaini yakaipa yeIOS 11 inosimudza bhero remaaramu pakati pevanonyanya kuchengetedza
Iyo Apple Watch Series 3 ndeyekutengesa zvakanyanya